Samsung Gear Sport adịworị ire na Spain | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Samsung, smartwatch
Ọ bụ ezie na Xiaomi na Apple bụ ndị isi ahịa, Samsung bụkwa otu n’ime ụlọ ọrụ ndị a ma ama na ahịa ejiji. Ndị otu mba Korea ewepụtala ọtụtụ elele egwuregwu na ahịa ruo ugbu a. Ugbu a smartwatch gị kachasị ọhụrụ, ndị Samsung Gear Sport, na-erutekwa ahịa ndị Spen.
Ọ bụ ihe ihe egwuregwu egwuregwu nke ụlọ ọrụ ahụ Ruo ugbu a. Ma maka imewe ya na nkọwa ya. A na-ahụta ya ka mmalite nke Gear Sport S3. Agbanyeghị na ọ na - ewetara ọtụtụ mmelite nke na - eme ka ọtụtụ na - ahụ ya dịka otu elele egwuregwu kacha mma ewepụtara n’afọ a. Anyị ga-agwa gị n'okpuru!
Nke mbu, ikwesiri gosiputa oke okike nke Samsung Gear Sport nwere. Ebe ọ bụ na enweghị mgbagha ọ bụ nnukwu ọrụ nke ụlọ ọrụ arụla n'echiche ahụ. Ke adianade do, ọ na-enye zuru ndakọrịta na smartphones. Ọ dịkwa dakọtara na iPhone, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a ụfọdụ ọrụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ. Ma, ke ofụri ofụri ọ bụkwa ike iji ya na Apple ekwentị.
Anyị na-ahapụ gị n'okpuru na nkọwa zuru ezu banyere nke a Samsung Gear Sport:
Ihuenyo: 1.2-inch okirikiri SuperAMOLED na 360 × 360 mkpebi (302ppi)
Ihuenyo nchedoCorning ozodimgba iko 3 na MIL-STD-5 agha ọkwa 810 igwe ndọrọ ego na-eguzogide
Nhazi: 1 GHz abụọ-isi
Nchekwa ebe obibi: 4 GB
Njikọ: Bluetooth 4.1, Wi-Fi b / g / n, NFC na GPS / GLONASS / Beidou
Batrị: 300 mAh (ikuku ikuku)
Size: 42,9 x 44.6 x 11.6 mm
Ibu ibu: 50 grams (na-enweghị mgbaaka)
Sensọ: Accelerometer, gyroscope, barometer, obi obi na ihere
Mmekọrịta: Samsung Galaxy nwere Android 4.3 ma ọ bụ karịa, gam akporo ngwaọrụ nwere Android 4.4 ma ọ bụ karịa na iPhone 5, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus na iOS 9.0 ma ọ bụ karịa.
Agba: Black na dara acha anụnụ anụnụ
Ya mere, anyị pụrụ ịhụ na ọ bụ a Ezigbo nche iji debe egwuregwu anyị. Samsung Gear Sport nwere ike ijikwa mmega ahụ na akpaghị aka site na ịchọpụta usoro, ịgba ọsọ ma ọ bụ mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè. Na mgbakwunye, ọ na-enyocha usu ahụ oge niile ma nwee ike idekọ ọnọdụ na obi mgbawa n'oge mmega ahụ.
Obi abụọ adịghị ya, nhọrọ zuru oke na ahịa elele egwuregwu. Samsung Gear Sport dị ugbu a na ahịa Spanish. Dị na ukara Samsung ụlọ ahịa na a price nke 353 euro. Kedu ihe ị chere maka elekere egwuregwu a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Gear Sport nche dị ugbu a na Spain
5G ga - abata na Spain site na Jenụwarị
Ngwa kachasị mma idalata